Politika:Andrasana izany ny MFM
Nivoaka tao anatin’ny fahanginany ny tompon’andraikitry ny antoko Mfm tamin’ny alalan’Ingahy Rakotovazaha Olivier.
Efa niandraikitra ny toeran’ny ministry ny Fitaterana tao anatin’ny fitondram-panjakana notarihin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Praiministra Sylla hatramin’ny janoary 2003 ny tenany. Izy koa izao no mamelona sy manentana indray ny antsoina hoe “Kmsb Fokontany Nasionaly” any anivon’ny Fokontany any.
Raha nivahiny tao amin’ny onjam-peon’ny Radio Antsiva izy ny alin’ny zoma teo ka nanontanian’ny mpihaino hoe “aiza marina ianareo Mfm amin’izao zava-misy ankehitriny izao?”, dia tsotra ny navaliny: « rehefa niteny ianao hoe hanao fahamarinana dia tsy afaka hiaro sy hiara-miasa aminao izahay rehefa tsy manao an’izay fahamarinana izay intsony ianao. Toraka izany koa ny hoe “fahamasinana” ».
Ny fahazoan’ny maro ny tenin’Ingahy Rakotovazaha Olivier izany dia tsotra : efa mibaribary ny tsy fanajan’ny mpitondra intsony an’izany “fahamarinana sy fahamasinana” noventesina sy nandrendrehana ny vahoaka teny an-kianja tamin’ny 2002 izany. Asa aloha na isan’ny mitovy fijery amin’ny maro ny Mfm momba an’izay, fa raha mitovy dia andrasan’ny maro ny ho fepetra horaisin’ny Mfm. Ny zavatra nambaran’ny Filoha Nasionalin’ny Mfm farany izao, raha nentin’ny Filohampirenena nitokana ny tetezan’Ifatihita izy sy Ratsirahonana, dia ny hoe “tarigetran’ny Mfm ka zary nifanarahany tamin-dRavalomanana ny hamorona Ravalomanana marobe amin’ny faritra isanisany eto amin’ny Nosy”.
Manara-maso aloha ny maro fa hatramin’izao dia toa tsy mbola nisy lasa mpizara ronono tamin’ny bisikileta izay nanombohan’Ingahy Ravalomanana nisandratra tamin’ny naha-isan’ny Malagasy mpanan-karena azy teto. Ny Malagasy mpitaingina bisikileta mpizara ronono nisy hatramin’izay, dia na efa lasan-ko razana na nanampy isa ny fadiranovana.
Ireo mpandraharaha hafa izay mba nandrandrain’ny tany ama-monina fa ho fanoitran’ny fitarihan-dalana harahin’ny maro ho amin’izay tontolo misy harena izay, dia izao mikaikaika noho ny tsy fisian’ny politikam-pirenena ara-toekarena matotra izao.
Ireo mba nanao asa fandraharahana an-tselika ka mba nihevitra fa hiditra eo amin’ny sehatry ny manara-penitra indray na ireo mpandraharaha nihevitra ny hampitombo amin’izay ny ambaindain’ny seha-pihariany, satria nanantena fa homen’ny fanjakana vahana kokoa amin’izay noho ny maha-mpandraharaha ny Filohampirenena, dia mivoady tongotra aman-tanana ankehitriny fa tratry ny antsojain’ny manam-pahefana mpandraharaha ka zary tadiaviny hatao ampihimamba na ifampizarana aminy ny raharaha.
Miandry ny Mfm hilaza ny heviny momba izany ny maro satria toa tsy mifanandrify amin’ny famaritana ny antsoina hoe “fahamarinana” izany. Ny “fahamasinana” aloha tsy iadian-kevitra fa mety samy hanana ny azy. Ny an’ny Filohampirenena mantsy, ohatra, dia mety ho mbola fanajany an’izany “fahamasinana” izany ny fitondrany ny rakitra voaangona tao am-piangonana na efa voahasina aza, fa ho an’ny olona sasany indray dia mety ho fahavetavetana eo anaterehan’Andriamanitra izany.
Izao famerenan’ny fitondrana ankehitriny ny fangejana ho azy samirery sy izay manaiky hanao fampielezankevitra ho azy ny haino aman-jerim-panjakana izao ve, ho an’ny Mfm, mbola “fahamarinana” sa tsia intsony ? Mifanandrify amin’ny fanajana ny demokrasia izay isan’ny mahasarotiny ny Mfm ve izao trangan-javatra ankehitriny ataon’ny mpitondra fanjakana izao? Ary ny fanjakana tan-dalàna mba ahoana ? Tsy ohatra velona mitohoka amin’ny tendan’ny Mfm izay manaporofo aminy ny fanitsakitsahana ny fanjakana tan-dalàna sy ny fanaovana ankivy ara-politika ny tsy mitovy firehana amin’ny mpitondra ve ny manjo ny Depiote Mfm, Herihajaina Andrianirina ?
Tsy ho tapitra ny fitanisana, nefa na tsy ambara eto avokoa aza dia azo antoka fa tsy atoro an’izany koa ny Mfm, ka ahoana? Mbola hiaro ny tsy mijoro amin’ny fahamarinana ihany ve sa mba hamotsipotsitra ny tsy mety? Tsy voatery hanohitra ange ny filazana ny marina ê ! Tsy ny Mfm mihitsy no ndeha hatoro an’izany. Aza avela ho sahiran-tsaina ny momba anareo ny vahoaka fa miandry ny fihetsikareo satria ny mpanohitra amin’ny ankapobeny ankehitriny toa tsy mahita afitsoka, raha ny fomba hanitsiana ny famindran’ny fitondrana no asian-teny.